Iingxelo zeBascox ze-Forex | FXCC
Education - Amanqaku kunye tutorials - Basics Forex
Iingxelo zeBakala zeBhasi Yazi kunye ne-Forex yemarike kunye nezinto ezibalulekileyo eziza kukunceda uqonde izinto ezisiseko zokuthengisa. Wonke amanqaku anikezelwe apha apha kukukunceda ukwandisa ulwazi lwakho kwaye ukwandise ulwazi lwakho kwishishini jikelele.
Yintoni isalathiso se-Forex?
Xa sisiva okanye sifunda amagama athi "isibonisi se-forex", siye sicinge kwangoko ngezalathi zobugcisa. Ezi zezixhobo zemathematika, ezibonisa imizobo esizibeka kwiitshathi zethu zokwenza izigqibo ezifanelekileyo zokurhweba nge-forex.
Apha siza kuthetha ngeentlobo ezahlukeneyo zezalathi ze-forex ezifumanekayo kuwe, kwaye siza kuzihlula ngokwamaqela amane aphambili kwaye sinike imizekelo yendlela esebenza ngayo.
Yintoni i-Elliott Wave kwi-Forex Trading
Ithiyori ka-Elliott Wave yaphuhliswa nguRalph Nelson Elliott emva phayaa ngeminyaka yee-1930. Ucelomngeni kwinkolelo eyamkelweyo ngexesha lokuba iimarike zezemali beziphethe ngokuhamba ngokungenangqondo kunye nokungahambelani.
U-Elliott wayekholelwa ukuba uluvo kunye nengqondo zezona ziqhubi zibalaseleyo kunye nefuthe ekuziphatheni kwentengiso. Ke ngoko, ngokokubona kwakhe, kunokwenzeka ukufumana imarike kunye neepateni.
Izicwangciso eziphezulu zolawulo lomngcipheko kurhwebo lwe-forex
Ulawulo lomngcipheko yenye yezona zinto zixhaphakileyo nezingaqondakaliyo zokurhweba kwangaphambili.
Ukuba uyasilela ekuphuhliseni iindlela ezingqongqo zolawulo lomngcipheko kurhwebo lwakho lwe-forex, uya kuzibekela ngokwakho ukuze ulahlekelwe yimali engaphezulu kunokuba kufuneka.
Uyakhathazeka, wenze izigqibo ezingxamisekileyo, wophule isicwangciso sakho kwaye wenze yonke inkqubo ye-FX yokurhweba ibe nzima ngakumbi kunokuba kufanelekile.
Uyenza njani imali kwi-forex
Ukwenza imali ngokurhweba kwangaphambili, uvula iakhawunti kunye nomrhwebi, usebenze ngempumelelo ngababini, ugcinise inzuzo, emva koko uphumelele impumelelo yakho ekhawulezileyo ukusuka kumgangatho wenqanawa yakho yobunewunewu kunye nabahlobo bakho (abasanda kufumanisa) abahle. Ncwina, ukuba bekulula nje.
I-boulevard yamaphupha aqhekekileyo e-forex inde kwaye ayagqwetha, kunye neengozi ezininzi ezenzekileyo ezilahliweyo ecaleni kwendlela. Izinga lokuphumelela eliphantsi kurhwebo lwe-forex lilishwa kuba nakuphi na ukusilela kulula ukunqanda.
Iimpazamo zokurhweba eziphambili ze forex; nendlela yokuziphepha
Ukusika iimpazamo kurhwebo lwakho lwe-forex kubalulekile ukuba uza kwenza inkqubela phambili, kodwa kuqala, kufuneka uchonge iimpazamo ezinokubakho kwaye uzisuse okanye uzithintele.
Apha siza kuthetha ngezona mpazamo zibonakalayo zabathengisi abazenzayo. Ezinye zazo, ukuba ziyekwe zingacelwanga mngeni, zinokuba nefuthe elibi kunye neziphumo ezibi kwiziphumo zakho.
Ungaba njani ngumrhwebi we forex ophumeleleyo
Abathengisi abaphumelelayo be-forex benziwa, abazalwanga. Iindaba ezimnandi kukuba sonke sinokuba ngabarhwebi beFX abaphumeleleyo.
Abathengisi abaphambili be-forex abanayo nayiphi na i-DNA ekhethekileyo okanye inzuzo yemfuza. Akukho nto injenge-sage yokurhweba ebona iipateni kunye neendlela ezenzeka kwiitshathi abanye abangakwaziyo.
Uba ngumrhwebi we-FX ongcono kunye nempumelelo ngokuzinikezela kunye noqeqesho oluqinisekileyo ngelixa unamathela kwisicwangciso sokurhweba esineenkcukacha, kubandakanya izinto ezibalulekileyo zesicwangciso kunye nolawulo lwemali.
Apha siza kuthetha ngeebhloko ezisixhenxe zokwakha eziyimfuneko ekufuneka ubeke endaweni yokwakha iziseko ezifanelekileyo zempumelelo yorhwebo.
Yintoni ukurhweba ngeSwing kwi-Forex?
Rhoqo, iimarike ze-forex zingqina ingqokelela eyahlukeneyo yeendlela zokurhweba. Nganye inezinto zayo eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga, kodwa amanye amaqhinga anerekhodi yomeleleyo kunenye xa kufikwa ekusebenzeni.
Urhwebo lwe-Swing lufumene ukuthandwa okukhulu phakathi kwabathengisi be-forex ngokukwazi kwabo ukwahlula ingqolowa kumququ. Abanye bakujonga njengeyona ndlela isisiseko yorhwebo lwe-forex.
Kodwa yintoni ukurhweba ngokurhweba, kwaye kutheni sithetha ngayo?
Yintoni ulingano kwi-forex?
Yintoni into yokuqala ethi qatha engqondweni yakho xa usiva igama elithi "Ubulungisa"?
"Kubonakala ngathi lilingana likaEinstein kum".
Ewe, impendulo engalunganga!
Ubulungisa bulula kakhulu kunalo naluphi na ulingano oluntsonkothileyo.
Masizame ukufumana ukuba yintoni ngokuchanekileyo ukulingana kwi-forex.
Yimalini oyifunayo ukuze uqale ukurhweba nge Forex?
Omnye wemibuzo eqhelekileyo abathengisi abatsha bajonga ukuba ingakanani imali yokurhweba abayifunayo ukuqala ukurhweba kwangaphambili.
Ngaba zizigidi zeedola, okanye ungaqala nge $ 100?
Siza kuwuphendula lo mbuzo kwesi sikhokelo.
Ke, ukuba ungumntu ojonge ukuqala uhambo lwakho lokurhweba, qiniseka ukunamathela kude kube sekupheleni.
Yeyiphi esona siCwangciso seNtengiso ye Forex?
Ukwenza iipip, ukuzigcina, kunye nokuphinda inkqubo sisitshixo sokufumana inzuzo ethembekileyo kurhwebo lwe-forex.
Ngelishwa, ayisiyonto ilula njengoko ibonakala.
Kuya kufuneka uphuhlise isicwangciso sokurhweba esikunika ithuba lokukhuphisana kwiimarike, ulawulo lomngcipheko oqinileyo, kunye nokuqonda okuqinisekileyo kwengqondo yakho yorhwebo.
Kodwa yintoni egameni likaThixo isicwangciso sokurhweba kwangaphambili, kwaye kutheni le nto sithetha ngayo?
Ubeka njani ukulahleka kokuyeka kwaye uthathe inzuzo kwi-Forex?
Into ebaluleke kakhulu kumrhwebi kukuqokelela kunye nokugcina inzuzo yorhwebo.
Kwimeko apho uphulukene nayo yonke imali yakho, akukho ndlela yokubuyisa ilahleko; uphelelwe ngumdlalo.
Ukuba wenza ezinye iipipi, kufuneka uzigcine kunokuba uzibuyisele emarikeni.
Nangona kunjalo, masinyaniseke. Imakethi ihlala isenza le nto ifuna kwaye itshintshela kwicala elifunayo.
Yintoni iMargin yasimahla kwi-Forex
Mhlawumbi ukhe weva ngegama "umda wasimahla" kurhwebo lwangaphambili, okanye lixesha elitsha kuwe. Nokuba yeyiphi indlela, sisihloko esibalulekileyo ekufuneka uqonde ukuba uza kuba ngumrhwebi we-forex olungileyo.
Kule khokelo, siza kuphula umgama okhululekileyo kwi-forex, ingabalelwa njani, ukuba ihambelana njani nokufumana amandla kunye nokunye okuninzi.
Ke qiniseka ukunamathela kude kube sekupheleni!
Yintoni ukuthengisa kwemini kwi-forex
Kwihlabathi le-adrenaline lokuthengisa ngosuku lwe-forex, nantoni na enokwenzeka ngokuqhwanyaza kweliso.
Ukurhweba ngemini ye-Forex kunokuba lishishini elinenzuzo kakhulu (ukuba nje uyenza ngendlela efanelekileyo). Nangona kunjalo, kunokuba nzima kubaqalayo, ngakumbi abo bangazilungiselelanga ngokupheleleyo ngesicwangciso esicwangciswe kakuhle.
Nokuba abathengisi bemini abanamava baya kungena engxakini kwaye balahlekelwe yimali.
Ke, yintoni kanye ngokurhweba ngemini kwaye kusebenza njani? Masizame ukufumanisa!
Yintoni iAkhawunti yeDemo kwi-Forex?
Ukuba ukhona entsha kurhwebo lwe forex, emva koko umbuzo ocacileyo oza kuvela entlokweni yakho yile nto Iakhawunti yedemo ye forex, kwaye ungarhweba njani ngayo?
Abaqalayo abaninzi abanalo nofifi malunga neeakhawunti zedemo kunye nendlela abasebenza ngayo.
Kwesi sikhokelo, siza kuphendula le mibuzo kwaye sityhile ukuba kutheni kufuneka uqale ngokurhweba ngeakhawunti yedemo.
I-Forex kunye neNtengiso yeStock
Kule mihla abathengisi banokufikelela kwinani elikhulayo lezixhobo zokurhweba, ukusuka kwi-FAANG (i-Facebook, i-Apple, iAmazon, iNetflix, kunye neGoogle) kwisitokhwe kwilizwe elikhawulezayo le-forex.
Ukukhetha phakathi kwezorhwebo ukurhweba kunokuba nzima, kwaye uninzi lwezinto kufuneka ziqwalaselwe njengeyona nto ilungileyo.
Ke ngoko, kubalulekile ukuba wazi umahluko phakathi kweemarike ezimbini kwaye yeyiphi onokuthi ukhethe ukuyithengisa.
Ukuba ukhangele i-newbie ukuqala uhambo lwakho lokurhweba, esi sikhokelo siza kukunceda.
Ezona zibini ziBalaseleyo kwiZorhwebo
Ngobuninzi bezibini onokukhetha kuzo, ungazikhetha njani ezona zibini zibalaseleyo zokuthengisa?
Ewe, yile nto siza kuyifumana kwesi sikhokelo.
Siza kuqhekeza iintlobo ezahlukeneyo zeerandi zemali, kwaye yeyiphi kuzo enokunyuka inzuzo yakho.
Zeziphi ezona ziQonga ziPhambili zoRhwebo nge-Forex?
Ukuzibuza ukuba leliphi elona qonga lifanelekileyo lokuthengisa?
Cacisa kwakhona, njengoko kwesi sikhokelo; Siza kukuxelela ezona ziqonga zibalaseleyo ze-forex kwaye yeyiphi oyikhethileyo kwintengiso yakho.
Ungayisebenzisa njani iMetaTrader 4?
Ukuba lixesha lakho lokuqala usebenzisa iqonga le-MT4, inani elikhulu leetab, iifestile, kunye namaqhosha anokumangalisa.
Kodwa ungakhathazeki, njengoko, kwesi sikhokelo, siza kuphazamisa indlela yokusebenzisa iMetaTrader 4 kunye nendlela onokuyisebenzisa ngayo amanqaku ayo.
Elona xesha lililo lokurhweba nge Forex
Abaninzi abasandul 'ukufika bafika ngqo kwiimarike ze-forex. Bagcina iliso lahlukile Iikhalenda zoqoqosho kwaye urhweba kakhulu kuhlaziyo lonke lweedatha, ubona intengiso ye-forex, evulekileyo iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezintlanu ngeveki, njengendawo efanelekileyo yokuthengisa yonke imini.
Obu buchule abunakuphelisa ngokulula oovimba abarhwebi, kodwa bunokutshisa nomrhwebi ongagungqiyo.
Yintoni iScalping kwi-Forex?
Ukuba unayo Qalisa ukurhweba kwangaphambili, mhlawumbi ufumene igama elithi "Scalping." Kwesi sikhokelo, siza kuxoxa malunga ne-scalping kwi-forex kwaye kutheni oko kuthetha ukuba sisikali.
I-Scalping ligama elibhekisa kukuqhelanisa nokufumana inzuzo encinci mihla le ngokungena nokuphuma kwizikhundla izihlandlo ezininzi ngemini.
Yintoni amaxabiso eSenzo kwi-Forex?
Mhlawumbi ulivile igama elithi "isenzo sentengo" kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla, kodwa kwabanye, inokufana nokusombulula ii-algebraic equation. Musa ukuxambulisana; Njengakwesi sikhokelo, siza kungena kwinqanaba lesenzo sexabiso kwi-forex. Ke, ukuba usaqala, uyasifumana esi sikhokelo sinomdla.
Ukuba unomdla kwi-forex kwaye ufunde amanqaku ahlalutyo kunye neendaba, ngokuqinisekileyo uye wafumana indawo yexesha okanye ipayipi. Kungenxa yokuba i-pip yigama eliqhelekileyo kurhwebo lwe-Forex. Kodwa yintoni ipipi kunye nenqaku kwi-Forex?
Kule nqaku, siza kuphendula umbuzo wokuba yintoni ipayipi kwimarike ye-forex kunye nokuba le ngqondo isetyenziswa njani kurhwebo lwe-Forex. Ke, funda nje eli nqaku ukufumana ukuba zeziphi iipips kwi-forex.
Ukusasazeka yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwilizwe loRhwebo lweMali. Inkcazo yomxholo ilula. Sinexabiso ezimbini kwisibini semali. Elinye lazo lixabiso leBiza kwaye elinye liXela ixabiso. Ukusasaza ngumahluko phakathi kweNtloko (ixabiso lokuthengisa) kunye ne-Ask (ixabiso lokuthenga).
Ngombono weshishini, abarhwebi kufuneka benze imali ngokuchasene neenkonzo zabo.
Phakathi kwezixhobo ezininzi zotyalo-mali, ukurhweba nge-Forex yindlela ekhangayo yokwandisa imali yakho ngokufanelekileyo. Ngokuya kuvavanyo lweBhanki enguVimba yase-2019 yeBhanki yokuHlala kwiHlabathi (i-BIS) ye-6.6, amanani abonisa ukuba ukurhweba kwiimarike ze-FX kwafikelela kwi- $ 2019 trillion ngosuku ngo-Epreli ka-5.1, ukunyuka kwi- $ XNUMX trillion kwiminyaka emithathu eyadlulayo.
Kodwa isebenza njani yonke le nto, kwaye ungafunda njani i-Forex inyathelo ngenyathelo?
Kwihlabathi lokurhweba le-Forex, kufuneka ufunde iitshathi kuqala ngaphambi kokuba uqalise ukurhweba. Sisiseko apho uninzi lwamanani otshintshiselwano kunye nohlahlelo lwentengiso lwenziwe kwaye yiyo loo nto sisixhobo esibaluleke kakhulu somrhwebi. Kwitshathi ye-Forex, uya kubona umohluko kwiimali kunye namaxabiso atshintshisanayo kunye nendlela amaxabiso akhoyo ngoku ahamba nexesha. La maxabiso aqala kwi-GBP / JPY (iiphawundi zase-Bhritane ukuya kwi-yen yaseJapan) ukuya kwi-EUR / i-USD (ii-Euro ukuya kwiidola zaseMelika) kunye nezinye iirandi zemali onokuzijonga.
Ngaba umntu unokuba ngumthengisi we-Forex ophumelelayo?
Ngaphandle kokungathandabuzeki ukuthengisa ngokuphumelelayo abathengisi be-Forex beza kuzo zonke iimoko kunye nobukhulu, ukusuka kuzo zonke iingqungquthela zomhlaba. Abanye bathatha umsebenzi ngokukhawuleza, abanye bathatha ixesha elide, abanye bakwenza ixesha elide, abanye bexesha elipheleleyo, abanye banelungelo lokuzinikezela kumngeni onzima kakhulu, abanye abakwenzi.
Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye ne-debunked - Icandelo 2
Kuphela ipesenteji ezincinci zabahwebi abathengisa abaza kuyenza
Kukho ulwazi oluninzi, idatha kunye neengcamango kulo mbandela, kodwa akukho nanye into ecacileyo okanye ecacileyo. Sifunda ukuba i-95% yabathengisi bayaphumeleka, ukuba kuphela i-1% yabathengisi be-forex benza ukuthengiswa okuphilayo kwaye ukuba uninzi lwabathengisi ludela emva kweenyanga ezintathu kunye nokulahleka kwe-10k. La manani anokuba yinyani, kodwa afuna ukuhlalutya okungakumbi ngaphambi kokuwamkela njengenyaniso.
Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye ne-debunked - Icandelo 1
Ingaba sifumana umsebenzi weentengiso ze-forex ngengozi okanye ukuyila, siyizilwanyana zasekuhlaleni nakwihlabathi leendaba ezentlalo esihlala kuzo, ekugqibeleni siza kufumana iifom kunye nezinye iindlela zokuzonwabisa zentlalo, ukwabelana nokuxoxa ngeengcamango zethu zorhwebo. Njengoko sifumana iiforam nezinye iindawo zokuxubusha, siya kuqaphela ukuba ezinye izinto ezixhatshazwayo zithatha. Iqela leqela licinga ukuba ekugqibeleni likhula kwaye linyonge izifundo ezithile; "Oku kusebenzayo, oku akunjalo, yenza oku, ungenzi oku, ungayithobeli, phawula kule" ...
Indlela efanelekileyo yokuthengisa i-Forex inokuphelisa umngcipheko wexesha elifutshane
Njengabahwebi siyaziqhayisa ngokudala isicwangciso sokuthengisa ubungqina bombhoxo esinolawulo olunzulu lwemali / ukulawulwa kwengozi kunye nokuziphatha. Nangona kunjalo, isiphakamiso esivela kwisihloko, kukuba kukho amaxesha apho sibona inzuzo isiphunyuka kuthi, siyazivumela ukuba kwenzeke, ngaphandle kokuzama ukuthatha inzuzo engaphezulu.